फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री : डा. भीमार्जुन आचार्य - CentralKhabar - No 1 Online News Portal from Nepal
फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री : डा. भीमार्जुन आचार्य
सेन्ट्रल डेस्क प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०७८, सोमबार २०:०५
प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम आफुमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास रहेको प्रमाणित गर्न विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएनन् । अबको केपी ओलीको बाटो के होला भन्नि चर्चा चल्न थालेको छ ।
विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त त हुन्छन् । तर, अर्को सरकार नबनेसम्म यिनी नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहन्छन् । र, त्यसपछि ७६ (३) को सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । तर, ७६ (३) अनुसार सरकार गठन हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, फेरि ७६ (३) अनुसार विश्वासको मत पाएन भने ७६ (५) मा जानुपर्ने हुन्छ ।
र ७६ (५) मा जाँदा पनि एकपटक ७६ (२) मै फर्कनुपर्ने पनि हुन्छ । त्यो भनेको एकपटक फेरि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पुराउन सक्ने अवस्था आएको खण्डमा ती दलहरु मिलेर नै सरकार बनाउने हो । तर, विश्वासको मतको सामना गरेको अवस्थामा ७६ (२) पूरा भएको मानिने भएकाले ७६ (३) मा जानुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिएनन् भनेचाहिँ ७६ (२) सकियो र ७६ (३) र ७६ (५) बाँकी रहन्छ।
क्याबिनेट सकेर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवासमा
अहिले उपयुक्त विकल्प चुनाव नै हो : कमल थापा